လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်အတွက် ဓာတ်ပုံအဟောင်းလေးတွေကို စုတဲ့ ခရီးမှတ်တမ်း – Open History Pathein
Posted on July 7, 2020 July 10, 2020 by ohpathein
လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်အတွက် ဓာတ်ပုံအဟောင်းလေးတွေကို စုတဲ့ ခရီးမှတ်တမ်း
ပုသိမ်မြို့ ဓာတ်ပုံအဟောင်းတွေ ပြပွဲအတွက် ဓာတ်ပုံတွေ ရသလောက်စုဆောင်း ချင်ခဲ့ ပေမဲ့ ကိုဗစ် ကာလ အခွင့် မသာတာကြောင့်
မလုပ်နိုင်ခဲ့ ပါဘူး။ အခုတော့ ကြိုးစားပြီး စုဆောင်းကြည့်ဖို့ ပထမဆုံးခရီးလေးထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံတွေဆိုတာ မစုဆောင်းဖြစ်ရင်
ရေ‌ကြောင့် ၊ မီး‌ကြောင့် ၊ ရာသီဥတုကြောင့် အလွယ်တကူ ပျက်စီးနိုင်တယ် မဟုတ်လား။
ပုသိမ် မြို့နဲ့ မလှမ်းမကမ်းမှာရှိတဲ့ မြို့ချောင်း ဆိုတဲ့ ရွာလေး တစ်ရွာ ကို ကျွန်တော်တို့
လူထုအမှတ်သညာအဖွဲ့သားတွေ နဲ့ အတူ မြို့ခံလူငယ်လေးများ ရဲ့ ဦးဆောင်မှုနောက်ကို လိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။
မိုးလေးက တဖွဲဖွဲ နဲ့ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့တစ်တွေ ကားလေးကို အတူစီးရင်း ချီတက်ခဲ့ ကြတယ်။
ပုသိမ်မြို့ နဲ့ ဆိုရင်တော့ ဒီရွာ လေးက နာရီ၀က်လောက် ကား မောင်းရပါတယ်။ ကားပေါ် မှာတော့ လူထုအမှတ်သညာပွဲတော် ဒါရိုက်တာ
ကိုအောင်စိုးမင်း ၊ ရုံးအဖွဲ့သား ၄‌‌ ‌‌ယောက် ၊ မြို့ခံ ကိုဘိုဘို ၊ လူငယ် လုပ်အားပေးကူညီသူ ၃ ယောက် နဲ့ ကားဆရာ‌တို့ ရယ် စကားလေးတွေပြောရင်း
ပုသိမ်မြို. ထဲကို ဖြတ်ပြီးစီးဆင်းနေတဲ့ ချောင်းလေး တွေအကြောင်း ကို မြို့ခံကိုဘိုဘို က ပြောပြရင်း မိုး‌ရေထဲမှာ ကားလေးကို ခပ်ဖြေးဖြေးလေး
မောင်လာခဲ့ကြပါတယ်။ ပုသိမ်မြို့ ရဲ့ အ‌‌‌ရှေ့ဘက်လောက် ခပ်လှမ်းလှမ်းလေး လို့ယူဆရတဲ့ ဘက်ကို ထွက်လာခဲ့ ကြတယ်။ လမ်းဘေး ၀ဲယာမှာလဲ
အသစ်အသစ်ပြောင်းလဲနေ့ အိမ်ရာတွေ ၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေ နဲ့ စည်ကားသိုက်မြိုက်နေပါတယ်။ တိုးတက်လာတာနဲ့ အတူ ဆုံးရှုံးသွား
တာတွေ လဲ မနည်းလှပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ သဘာ၀ အလှတရားကြီးနဲ့ စိမ်းလန်းစိုပြေ စေဖို့ ပေးခဲ့တဲ့ သစ်ပင်ကြီးတွေကို လဲ ခုတ်လှဲထားတာတွေလဲ မနည်းဘူး။
ဒါတွေကိုလဲမြင်ရတော့ နှမြောတသ ဖြစ်မိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ် က သစ်တစ်ပင်ခုတ် ထောင်သုံးနှစ်ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်‌ လေးတွေ ကို လမ်းဘေးဝဲယာ မှာ
မကြာခဏဆို သလို မြင်ဖူးမိပါတယ်။ ယခုအခါမှာ အဲ လို ဆိုင်းဘုတ်လေးတွေ လဲ မတွေ့ရတော့ဘူး။ သစ်‌ပင်တွေ ခုတ်လှဲနေကြတာတွေ လဲ မျက်စေ့ ရှေ့မှာ
အများကြီးပဲ မြင်တွေ့ရပါတယ်။ ဒီလို နဲ့ အစိုးရရုံး‌‌တွေ ၊ ၀န်ထမ်းအိမ်တွေ ကြားထဲ ကနေပြီး ကွန်းကရိလမ်းလေး အတိုင်း ဆက်မောင်းလာရာ ဘေး တစ်ဖက်တစ်ချက်ဆီမှာ
လယ်ခင်း စိမ်းစိမ်းတွေနဲ့ သိပ်လှနေတဲ့ ရှုခင်း တွေ ကို ကြည့် ရင်း ကွန်းကရိ လမ်းလေး အဆုံးမှာတော့ အိမ်လေးတွေကို စတွေပါတော့ တယ်။ မိုးလေးကလဲ
တ ဖွဲဖွဲ နဲ့ ကျွန်တို့ လဲ အဲဒီ ရွာလေး ကို ရောက် လာခဲ့ တယ်။ကျွန်တော် တို့ သွားမဲ့ အိမ်လေး ကို ဘယ်သူမှ လဲ တစ်ခေါက်မှ မရောက် ဖူးဘူး။ ဒါကြောင့်
ကျွန်တော်တို့ တွေ တဲ့ သူကို မေးမယ်ပေါ့…. ရွာထဲ မှာ လူ အသွားအလာ သိပ်မတွေ့ရဘူး မိုးရွာနေလို့ လားတော့ မသိ ဘူး။ အိမ်တွေ ကလဲ ခြံ၀န်းက
အကျယ်ကြီးတွေ ဆို တော့ အိမ်ထဲက လူတွေ ကို လဲ လှမ်းမမြင်ရဘူး….ဒါနဲ့ ဈေးဆိုင် လေး တစ်ခု တွေ့လို့ ကျွန်တော်တို့ ကားလေး ကို ရပ် လိုက်ကြတယ်
ကားပေါ်က ဆင်း ပြီး ဆိုင်လေးရှိတဲ့ အိမ်လေးဆီကို ကျွန်တော် သွားပြီး ဦးအောင်မြိုင် တို့ အိမ်ဘယ်အိမ်လဲ ဆိုတာကို မေးလိုက်ပါတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ ဦးအောင်မြိုင်က
ဘုန်းကြီး၀တ်နေတယ်တဲ့။ဒါ ကြောင့် သူ့အိမ်လေး ကို လမ်းညွန်ပေးဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဦးအောင်မြိုင်အိမ်ကကျော်လာခဲ့ ပြီ တဲ့… ဒါကြောင့် ကျွန်‌တော်တို့ လဲ ကားလေးကို ပြန်လှည့် ပြီး သူ ညွှန် ပြတဲ့ လမ်းလေးအတိုင်း ဆက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ ရွာ လမ်းလေး ဆိုတော့ ခပ်ကျဉ်းကျဉ်းလေးပေါ့။ ခြံ၀န်းကြီးတွေကတော့
အကျယ်ကြီးတွေ။ ခြံထဲမှာလဲ စားပင်သီးပင်တွေ နဲ့ တိတ်ဆိတ်နေတာပဲ ၊ အဲဒီလမ်းလေး အတိုင်း ဆက်ပြီး မောင်း လာခဲတာ လမ်းလေးအဆုံးမှာတော့
ခြံ၀န်း အကျယ်ကြီး တွေ့တယ်။ အဲဒီ ခြံ၀န်းထဲမှာတော့ အိမ် သုံး ၊ လေး အိမ်ရှိ တယ်။ အဲဒါ နဲ့ ‌ခြေတံရှည်လေး နဲ့ ပျဥ်ထောင်အိမ်လေးကို ဦးတည်ပြီး
ဦးအောင်မြိုင် တို့ အိမ်လား လို့ မေးလိုက်တော့ အထဲက အဖွားအိုတစ်ယောက်ထွက် လာတယ်။ ဦးအောင်မြိုင်က ဘုန်းကြီး ၀တ်နေတယ်။ အဖွားက
သူအမျိုးသမီးပါဆိုပြီး အသက် ရွယ်ကတော့ ခြောက်ဆယ် ၀န်ကျင်လောက်ရှိတဲ့ သန်သန်မာမာ နဲ့ အဖွားကထွက်လာပြီးတော့ဖြေတယ်။ သူဘေးမှာ ၇နှစ်၊ ၈နှစ် အရွယ်
ကလေး မလေး တစ်ယောက် ပါလာ တယ်။ အဲဒါနဲ့ ကျွန်‌တော်တို့လဲ ဓာတ်ပုံအဟောင်းလေးတွေ လာ ယူတာပါဆိုပြီးပြောလိုက်တော့ ဟုတ်ကဲ့ အိမ်ထဲ
၀င်ပါတဲ့ …… ခုနက အဖွာနဲ့ အတူ ပါ လာခဲ့ ကလေးလေး က ထီး လေး ကိုင် ပြီး မျက်နှာလေး က ပြုံးပြုံးပြုံးပြုံးနဲ့ ဖော်ဖော်ရွေရွေ ပဲ။
ကျွန်တော် လဲ မနေနိုင် တာနဲ့ မီးမီး နာမည် ဘယ်လို ခေါ် လဲ ဆို တော့ ရှေ့သွားလေး ကျိုးတိုးကျဲတဲနဲ့ အိမ့်တန်ခူးနိုင်လို့ ဖြေတယ်။
မီးမီး ကဘယ်နှစ် တန်းလဲ ဆို တော့ နှစ်တန်း တဲ့။ ကျောင်းတက်‌ရသေးဘူး လားဆိုတော့ ကျောင်းတွေက ဖွင့်သေးဘူး တဲ့။ ဒါနဲ့ အထဲ ကို
၀င်သွားကြာတာပေါ့။ ကလေးမလေး ကို ဝိုင်း ပြီး မေးကြပြုကြနဲ့ အိမ်ပေါ်ရောက်တော့ အဖွားက ဓာတ်ပုံ အဟောင်းလေးတွေ
ထုတ် ပေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့လဲ ပုံ တွေ ကို ကူး ရင်း မြို့ချောင်း ရွာလေးရဲ့ အကြောင်း အဖွား ကိုမေးမြန်း ကြည့်ဖြစ်တယ်။ အရင်တုန်းကဆိုရင် ဒီ ရွာလေး
ကဘယ်လိုရှိခဲ့တာလဲ။ ခုရော ဘယ်လိုတွေပြောင်းလဲ သွားပြီးလဲ ဆိုပြီး အရင်ကတော့ ဒီ မြို့ ချောင်းရွာလေးက တစ်ရွာလုံး ကအမျိုးတွေ
ချည်း ပဲ တဲ့။ ယောက်ျားဘက်ကအမျိုးရယ် ၊ ကျွန်မဘက်က အမျိုးတွေ ရယ်နဲ့ တဲ့ အိမ်‌ခြေကလဲ အဲဒီ လောက်မများ ဘူးတဲ့။ ခုတော့ အပြင်
ကလူတွေ ရောက်လာ ကြတယ်တဲ့။တိုင်ရင်းသာတွေရော ၊ တချို့မြို့ ပေါ်က ပိုက်ဆံ ရှိတဲ့ သူတွေကလဲ ဒီ ဘက်တွေ မှာ ခြံတွေ
၀ယ်ပြီး တော့ အိမ်တွေ ဆောက် ပြီး ငှားစားကြတယ်။ လျှပ်စစ် မီးရတာလဲ ငါး နှစ်လောက်ရှိ ပြီ။ အခု အချိန်က ကောက်စိုက်ရာသီ ဆိုတော့ ရွာထဲကရှိသမျှ
လူ တော်တော် များများက ကောက်စိုက်ထွက်နေကြတယ်။ အဖွားတို့ အိမ်မှာ လဲ လူအငှား အ‌ယောက် ငါးဆယ်လောက်နဲ့ ကောက်စိုက်နေကြတယ်။
အဖွာတို့ကတော့ တောင်သူပဲ လုပ်နေရတာပေါ့။ သမီး တွေ ကတော့ ကျောင်းဆရာမတွေ။ သူတို့တာ၀န်ကျတဲ့ ဆီမှာပဲ ခုလိုပိတ်ရက်တွေတော့ပြန်ပြီး အိမ်အလုပ်တွေကူလုပ်ပေးပါတယ်။ ဒီလို ရွာလေးထဲကနေပြီး ကျောင်းဆရာမတွေ မွေးထုတ်ပေးတာ ဂုဏ်ယူစရာကောင်းလှပါတယ်။
ဒီလို နဲ့ ဒီ ရွာလေးရဲ့ ပြောင်း လဲ မှုတွေကို အဖွားက တစ်ဆင့် ပြောပြလို့ အားလုံး သိလိုက်ရတယ်။ ပြီး တော့ ဓာတ်ပုံ အဟောင်းလေးတွေ ကိုကူးရင်း ခုနက
အိမ့်တန်ခူးနိုင်လေး ကို ဝိုင်းပြီး မေးကြပြုကြ… မျက်နှာလေးပြုံးပြုံးပြုံးပြုံး နဲ့ ‌ရှေ့သွားလေးတွေမရှိတော့ စကားလေး မပီတပီလေး မေးသမျှ တွေကို
အကုန်ဖြေတယ်။ တအားလဲ သွက်တယ်။ ပြီးတော့ အဖွားနားမှာ ကပ်ပြီး အဖွားကို ကြည့် လိုက် ၊ ကျွန်တော်တို့ကိုကြည့် လိုက် ဒီလို့ နဲ့ ပုံလေးတွေ ကို ကူးပြီး
အဖွားကို နှုတ် ဆက် ၊ အိမ့်တန်ခူးနိုင်လေးနဲ့အမှတ်ရပုံလေးတွေရိုက်ကြရင်းနဲ့ အဲဒီအိမ်လေးကနေပြီး ကားလေး ဆီကို ပြန်လာခဲ့ကြတယ်။ ကျွန်တော် ကားပေါ်တက်ပြီး ကာစလေးမှာ
အသံလေး တစ်သံ ထွက် လာတယ်။ “တာ့တာ”……. တဲ့။ ဘယ်က အသံလဲလို့ ကြည့် လိုက်တော့ ခုနက နဲ့ ခြံ၀န်းကြီး ထဲ ကနေပြီး နောက်ထပ် ကျွန်တော်တို့ ကားနဲ့နီး တဲ့ အိမ်လေးပေါ်ကနေ
အိမ့်တန်ခူးနိုင်လေး က လှမ်းနှုတ်ဆက်တာကို တွေ့ လိုက် ရတယ်။ အဲဒါနဲ့ သူကို ပုံလေးတစ်ံလှမ်းရိုက် လိုက်ပြီး အားလုံးက သူကို ဝိုင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ကြတယ်။ ဒီ လိုနဲ့ကျွန်တော့်တို့ရဲ့ လူထုအမှတ်သညာပွဲတော် ဓာတ်ပုံအဟောင်းလေးတွေ စုတဲ့ ခရီးစဉ်လေး တစ် ခု ပြီး ဆုံးခဲ့ပါတယ်။
Previous PostPrevious ပုသိမ်မြို့ခံ လူငယ်များ နှင့် လူထုအမှတ်သညာ အဖွဲ့သားတို့ ၏ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများ
Next PostNext ပုသိမ်ထီးနဲ့ သနပ်ခါးမေ၊ ပြိုင်ပွဲဝင်ပုံရိပ်များ ( ၂ ) Thanakha Contest, Open History Project Pathein